वजन सन्तुलित राख्न दिनमा कति पटक खाना खाँदा राम्राे ?
दिनमा कतिपटक खाना खानु आफ्नो स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुन्छ भन्ने सबैको मनमा उठ्ने जिज्ञासा हो । सामान्यता बिहान नाश्ता, दिउँसो खाना, साँझपख चिया र केही स्न्याक्स र रातमा हल्का खाना गरी चार पटक खाने ग...
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अर्बुद रोगको उपचारमा मात्र नभएर निरोधात्मक उपायमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । आजदेखि काठमाडौँमा शुरु भएको ‘विकासशील देशहरुमा क्यान्सर रोग नियन्त्रणका च...
मकवानपुरमा डेंगुबाट एकको मृत्यु
चितवन । डेंगु रोगका कारण पछिल्लो समय यहाँ एक जनाको मृत्यु भएको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय चितवनका कीट नियन्त्रण निरीक्षक राम केसीका अनुसार मृत्यु हुनेमा मकवानपुर जिल्ला हाँडीखोला–३ बस्ने ७९ वर्षी...
तेह्रथुम । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, तेह्रथुमले आफू मातहतका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न थालेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिपत्रबमोजिम जिल्लाका छवटै स्थानीय तहमा ...
लगातारको आन्दोलनपछि नर्ससँग वार्ता गर्न मन्त्रालयले बनायो समिति
काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयले आन्दोलनरत नर्ससँग वार्ता गर्न वार्ता समिति गठन गरेको छ। मन्त्रालयले प्रमुख विशेषज्ञ डा विनोदमान श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो। समितिका सदस्यमा डा गुणराज लो...
रुकुम । रुकुम पश्चिमको आठविसकोट नगरपालिकाले स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुन आउने महिलालाई निःशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने भएको छ । स्वास्थ्य संस्थामा आएर सुरक्षितरुपमा सुत्केरी गराउने उद्देश्यले...
सम्बन्धित जनशक्ति नहुँदा जिल्ला अस्पताल पर्वतमा शल्यक्रिया ठप्प
फलेवास, पर्वत । जिल्ला अस्पताल पर्वतमा विगत एक महिनादेखि शल्यक्रिया सेवा ठप्प बनेको छ । दक्ष जनशक्तिको अभावमा सबैखाले शल्यक्रिया सेवा अवरुद्ध हुँदा बिरामी समस्यामा परेका छन् । शल्यक्रियाका लागि एनेस्थ...
बुद्धि बंगारो के हो ? भ्रम र यथार्थ …
मानिसहरुको दाँतको सबैभन्दा पछिल्लो लाइनमा हुने दाँतलाई ‘बुद्धि बंगारो’ भनिन्छ । अंग्रेजीमा पनि यसलाई ‘विज्डम टिथ’ नै भनिन्छ । सबैभन्दा ढिलो उम्रिने दाँत यही हो, जुन करिब १८ वर्षपछि आउन सुरु गर्छ। उद्...
स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकमा डा तारानाथ पौडेल नियुक्त
काठमाडौँ । स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकमा डा तारानाथ पौडेले नियुक्त भएका छन् । डा पौडेलले पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयको प्रमुखका रुपमा काम गरिसकेकका छन् । स्वास्थ्य मन्त्री दिपक...
अष्ट्रेलियन एड्मिसनस् डे ज्यानुअरी २०१८ आयोजना
काठमाडौं । विद्यार्थीहरुलाई तिनका शैक्षिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि लामो समय देखि सघाउने कार्यका लागि परिचित नाम हो एईसीसी ग्लोबल । एईसीसीले लामो समयदेखि विद्यार्थीहरुको भविष्यका लागि तिनका शैक्षिक तथा ब...
आजदेखि ३ घन्टा काम छाड्दै देशभरका नर्स,माघ ७ पछि २४ घण्टा नै ड्युटी छाड्ने
काठमाडौं । आन्दोलनरत नर्सहरुले सोमबारदेखि एक सिफ्टको ड्युटी नै छाडेका छन्। दैनिक एक घण्टा ड्युटी छाडेर १ सातासम्म आन्दोलन गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुनुवाई नगरेपछि उनीहरुले आन्दोलनमा कडाइ गरेका हुन...
११ औं तहमा बढुवा भएका १९ डाक्टर नामावली
काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्रालय माताहतका कार्यालयमा कार्यरत १९ जना डाक्टर ११ औं तहमा बढुवा भएका छन्। मन्त्रालयको बढुवा समितिले उनीहरुलाई बढुवा गरेको हो। ...
ब्रेस्ट क्यान्सर पत्ता लगाउने ब्रा बन्यो
एजेन्सी – मेक्सिकोका एक जना विद्यार्थीले स्तन (ब्रेस्ट) क्यान्सर पत्ता लगाउने ब्रा बनाएका छन् । उनले यो ब्राको नाम ‘इवा ब्रा’ राखेका छन् । १८ बर्से जुलियन रियोस सान्टुले स्तन क्यान्सर पत्ता लगाउने ब्...
जाजरकोट । जाजरकोटको भाइरल प्रभावित क्षेत्र जुनीचाँदे गाउँपालिका वडा १, २ र ३ मा औषधि, डाक्टरसहितको टिम पुगेको छ । पूर्वगृहमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य शक्तिबहादुर बस्नेत, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव...
पाँच बुँदे सहमतिपछि प्रा.डा. गोविन्द केसीले अनसन तोडे
काठमाडौं । अनसनरत प्रा.डा. गोविन्द केसीले आफ्नो १४ औं अनसन तोडेका छन् । सरकारसँग शुक्रबार राति भएको ५ बुँदे सहमति भएपछि डा. केसीले शनिबार बिहान १० बजे अनसन तोडेका हुन् । चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थ...
नर्स अन्दोलन: हातमा कालाे कालोपट्टी बाँधेर सेवा
काठमाडौं । देशभरका नर्सहरु अन्दोलित भएका छन् । मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रबाट निष्कासन गरिएका नर्सिङ कर्मचारीहरुलाई बिनाशर्त अविलम्ब पुनर्बहाली, अधिकारसहितको नर्सिङ सेवा महाशाखा पुनर्स्थापना गरियोस्,...
सप्तरीका अस्पतालमा औषधिको अभाव
सप्तरी । सप्तरी जिल्लाका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा औषधि अभावका कारण गरिव तथा विपन्न परिवारका व्यक्ति तथा बिरामी उपचारबाट वञ्चित भएका छन् । स्थानिय निकायको निर्वाचन पश्चात सरकारी संस्था स्थानीय निकायम...
जाजरकोट । जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिका वडा १, २ र ३ मा दुई सातादेखि विभिन्न गाउँमा फैलिएको भाइरल ज्वरोबाट मृत्यु हुनेको संख्या १३ पुगेको छ । भाइरल ज्वरोबाट बुधबार थप एक जनाको ज्यान गएको हो । भाइरल ...
डा. केसीलाई मेडिकल कलेजका मालिकले ‘आतंककारी’ भने (प्रमाणसहित)
काठमाडौं । देशकाे सर्वाेपरी हित लगायत सहज स्वास्थ्य सेवा जस्ता विभिन्न माग राख्दै अनसनरत डा. गोविन्द केसीको पक्षमा लाखाैं नेपाली जनता,नेता सडकमा ओर्लिरहँदा युनिभर्सल मेडिकल कलेजका मालिक खुमा अर्यालले ...
नेपालगञ्ज । लामो समयको पर्खाइपछि बाँकेको खजुरास्थित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालबाट बहिरङ्ग उपचार सेवा आगामी माघ महिनादेखि शुरु हुने भएको छ । नेपाल सरकारअन्तर्गत रहेको सो अस्पतालले यसअघि केही...